Baaqa Ururuka Islaax ee Khilaafaadka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya – Islah Movement
By admin	 Last updated ديسمبر 2, 2020
Xarakada Islaax waxey aad uga welwelsan tahay khilaafka soo kala dhexgalay hay’adaha dawladda iyo deganaasho la’aanta siyaasadeed ee ka dhalan karta expertmommysworld.
Khilaafkaan kala qaybiyay xubnaha baarlamaanka, iyo hogaankiisa , hakad weyna geliyey hawlaha qaranka, ma aha mid u adeegaya qaranimada, midnimada iyo dib-u-heshiisiinta dadkeena; waxaana ka dhalan kara faragelinta shisheeye oo sii xoogeysata, amniga dalka oo faraha kasii baxa, dhaqaalaha oo wiiqma, dhisida hay`adaha qaran oo hakad ku yimaado.
Sidaas darted, Xarakada Islaax oo ka shaqaysa mar walba hirgelinta mabaadi’ida nabadeynta iyo dib-uheshiisiinta waxey soo jeedineysaa talooyinkaan soo socda, iyadoo u arkaysa, rajeyneysana iney xalka soo dhoweynayaan: iyadoo Alle ka cabsiga iyo dhawrida midnimada sal looga dhigayo xalinta khilaaf kasta وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
1) In dastuurka iyo qawaaniinta dalka la dhawro oo aan marna lagu xadgudbin.
2) In la hakiyo shirarka baarlamaanka muddo kooban si loo furo wada-hadallo dhexmara dhinacyada is-haya, fursadna loo siiyo heshiis laga gaaro khilaafka.
Saraakiisha Ciidamada oo Jawaari ku eedeeyay dhacdadii Golaha…
Guddoomiyaha G/Banaadir oo war ka soo saaray lacagihii canshuuraha…
3) In waxgarad Somaaliyeed oo labada dhinac raali ka yihiin ay qaataan hawlaha dhexdhexaadinta si looga fogaado dhexdhaxaadin shisheeye.
4) In laga fogaado adeegsiga xoog iyo hub-urursi keeni kara dhiig daata.
Waxaan Ilaahey uga baryeynaa dawladda iyo ummadda inuu tawfiiqda waafajiyo.
Dr Cali Bashi Cumar
Guddoomiyaha Ururka Islaax
Mogadisho – Somalia
Saraakiisha Ciidamada oo Jawaari ku eedeeyay dhacdadii Golaha shacabka ka dhacday
Guddoomiyaha G/Banaadir oo war ka soo saaray lacagihii canshuuraha ee shacabka…
AMISOM oo la wareegaya ammaanka Xarunta Baarlamaanka, inta laga xaqiijinayo jawi…
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Beyle oo Shir…